Wararka ugu Dambeeyay ee ka imanaya Magaalada Jig-jiga ee Xarun u Ah ismaamulka Soomalida Itoobiya… | Wararka Dalka Iyo Dibada
Wararka ugu Dambeeyay ee ka imanaya Magaalada Jig-jiga ee Xarun u Ah ismaamulka Soomalida Itoobiya…
Wararka ugu dambeeyay ee ka imanaya ee xarun u ah ismaamulka Soomalida Itoobiya ayaa waxa ay sheegayaan in ay magaalada isaga baxeen ciidamada federalka magaaladana ay ka socoto bililiqo iyo dhac loo geysanayo dadka ka soo jeeda qowmiyadaha kale ee Itoobiya.
Ciidamada federalka ayaa la wareegay saaka xarumaha muhiimka ah ee dowlada waxaana la sheegay in ay rasaas is dhaafsadeen ciidamada dowlad deegaanka soomaalida ee loo yaqaan Liyuu Boolis.
Shacabka magaalada jig-jiga ayaa la sheegay in ay bililiqo u geysteen goobaha ganacsiga iyo guryaha dadka ka soo jeeda Oromada iyagoo gubay kaniisad ay ku cibaadeysan jireen dadka haysta diinta Masiixiga.
Lama oga illaa iyo hadda halka uu ku sugan yahay Madaxweynihi dowlad deegaanka Cabdi Maxamed Cumar hase yeeshee wasiirka warfaafinta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Idiris Ismaaciil Cabdi ayaa ku tilmaamay ciidamada soo galay magaalada Addis Ababa mid faragelin ah.
Hase yeeshee Idris Ismaaciil Cabdi ayaa sheegay in ciidamada Fedaraalka marka dastuurka la eego ay soo gali karaan oo kali ah marka ay dowladda deegaanka codsato.
Dhinaca kale Afhayeenka guud ee Jabhadda ONLF Abdulqadir Hassan Hirmooge Caddaani ayaa ku baaqay in la joojiyo faragalinta ciidamada fedaraalka Itoobiya.
Xaalada cakiran ee ka jirta magaalada Jigjiga ayaa timid kadib markii ra’iisal wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu sheegay in ay u qoondeeyeen shacabka ku nool dowlad deegaanka Soomaalida boqolkiiba shan dhaqaalaha laga helo ceelal shidaal oo laga qoday dhulka Soomaalida ee Itoobiya.